Justic Man on Flipboard
100 Flips |4Magazines | @kawthoungtar | Dagon University
RKAshley on Twitter: "#bummonday @MelisaMendiny #melisamonday http://t.co/ZoDgU9hCy2"
“Truth is like the sun. You can shut it out foratime, but it ain't going aw...
“Truth is like the sun. You can shut it out foratime, but it ain't going away.” ― Elvis Presley #quotes #quotesonlife - Adam Houlahan - Google+
ပရိသတ်တွေ စိတ်ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ Miss Internet Myanmar အငြိမ့် ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပါဝင်ကပြဖျော် ဖြေမယ့် ခင်ဝင့်ဝါက ဒီခေါင်းစဉ်လေး ကိုတအား သဘောကျတာ.... http://www.lwinpyin.com/2014/05/blog-post_3297.html
ပရိသတ်တွေ စိတ်ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ Miss Internet Myanmar အငြိမ့် ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ပါဝင်ကပြဖျော် ဖြေမယ့် ခင်ဝင့်ဝါက ဒီခေါင်းစဉ်လေး ကိုတအား သဘောကျတာ ကြောင့် ပါဝင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ “Miss Internet Myanmar ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်က ညီမတို့နှစ်ယောက် အတွက်လည်း ကိုက်ညီတယ်။ နှစ် ယောက်စလုံး ကလည်း Miss Myanmar ပြိုင်တဲ့ အခါမှာ Internet ဆုရခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် အခု ကမယ့် ခေါင်းစဉ်လေးက တအား သဘော ကျဖို့ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ သွားပြိုင်တုန်းက Talent Show ပြတဲ့ အခါ မှာ မြန်မာ အက ကရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာ အကကို နိုင်ငံခြား သားတွေ သဘောကျအောင်လို့ ကပြဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ခဲ့ရတယ်။ အခု ဒီမှာပြန်ဖျော်ဖြေရ မယ့်အတွက် တအား စိတ် လှုပ်ရှားပါတယ်။ ပရိ သတ်တွေ ဝေဖန်အားပေးတာကို.... သတင်းအပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ ===> http://www.phothutaw.com/2014/05/blog-post_2262.html
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာ တပ်မတော်ပါဝင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တိုက်တွန်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် တပ်မတော်သားတွေကပါ ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းပြော ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင်မြို့မှာ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက ကျင်းပတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လူထုဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို တိုက်တွန်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "တပ်မတော်ကို ဖေဖေတည်ထောင်ခဲ့စဉ်အခါတုန်း က ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ ချစ်ခင်လေးစားကြည် ညိုနိုင်တဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်ရေးဆိုပြီးတော့ ထူထောင် ခဲ့တာပါ၊ ဘယ်ပါတီ ဘယ်အုပ်စုအတွက်မှ တည်ထောင်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ သေသေ ချာချာပြောခဲ့ပါတယ်၊ ပြီးတော့ တပ်မတော်သား များအားလုံးလည်း တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာ .... သတင်းအပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ ===> http://www.phothutaw.com/2014/05/blog-post_3341.html
1.6.20145pm to 8 pm At junction square
ကားသစ်မှာစီးဖို့ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Choice တစ်ခု ပေးမယ်နော် တံခါးငါးပေါက်ပါ ၂၀၁၄ မိုဒယ် i 10 ကားသစ်သည် ကားတည်ဆောက်ပုံ ဆန်းပြားမှုကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ ပေးအပ်ထားသည့် အကောင်းဆုံး ကားဒီဇိုင်းဆုများကိုလည်း ရရှိထားသည်။ မိတ်ဆက်အပြီး လေးလတာအတွင်း Hyundai i 10 အတွက် အမှာစာ ငါးသောင်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။ www.imyanmarcars.com
မွေးကင်းစ ယောကျာ်းကလေးအမွှာ စွန့်ပစ်ထား မေ ၄ ရက် နံနက် ၆ နာရီခွဲခန့်က အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် လွန်းအောင်ဆန်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကွက်သစ် ရပ်ကွက်ရာအိမ်မှူး ဦးခင်လှသည် ဖန်စက်လမ်းထိပ် လှိုင်မြစ်ကမ်း တွင် မွေးကင်းစ အမွှာပူး ယောက်ျား ကလေး အလောင်း စွန့်ပစ်ထားကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ အဆိုပါကလေးအလောင်းကို အင်းစိန် ဆေးရုံသို့ ပို့အပ်ပြီး အင်းစိန်မြို့ရဲစခန်းက (ပ)၄၁၉/၁၄ ပြစ်မှုပုဒမ ၃၁၈ အရ အမှုဖွင့် စစ်ဆေး လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။ ဖိုးသူတော်(www.phothutaw.com) Credit :MOI Webportal Myanmar http://www.phothutaw.com/2014/05/blog-post_8418.html